Herinandro Iray Mandalo Any Koety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2017 5:00 GMT
Avy aminà sarimihetsika vaovao mankaminà fanomezana anarana ny andro iray manokana avy amin'ilay zava-pisotro malefaka malaza (zava-pisotro misy entona ho an'ny Amerikana) mankamin'ny famoronana marikà toeram-pivarotana lehibe any Koety. Ireo no sasany amin'ny resadresaka mandeha ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Koetiana tamin'ny herinandro lasa.
Miresaka momba ny Sharq , sarimihetsika iray vaovao novokarina tany Koety ny K TheKuwaiti. Mandefa rohy mankamin'ny horonantsary doka ho an'io izy.
“Sharq” (”EAST”), Notontosain'i Erik Sandoval ary Novokarin'i Abdulaziz Alsharhan, iray amin'ireo voalohany amin'ny sarimihetsika mahaleotena novokarina tany Koety ny “Sharq”. Aza tapahana ny fifandraisana mba hahazo rohy mankany amin'ilay horonantsary doka, sy ireo mbola fandraketana an-tsary ilay sarimihetsika tokony hivoaka ao amin'ny fetibe “Hala Febrayer” any amin'ireo teatra any Koety anatin'ireo fifaninanana maro manerantany.
Mandritra izany, Koetiana roa mpamaham-bolongana no nanambara ny 14 Febroary ho Shani Day (Shani dia zava-pisotro malefaka izay hita manodidina ireo firenena ao amin'ny Golfa ary novokarin'ny Pepsi Co) Asehon'i Nibaq antsika eo anaty sary iray ny halavan'ny fotoana kasainy hankalazàna ilay andro.
Naka sary trano iray izay nantsoiny hoe trano tsara tarehy mangaf i intlxpatr. Nankasitrahany ilay endriny miavaka ary hoy izy:
Isak'izay mahita ity trano ity aho, dia velon-tsiky. Tiako ny hoe misy olona manambola sy manana fahaizana mamorona hananganany ny trano izay niriany, ary ilay nanao azy tain'ny fahalalàna tsara fa hahazo tsikera izy. Naoriny ihany ilay trano na izany aza. Tsara ho azy izany.
Vonona ho an'ny fotoana sasany mampahatahotra ? Nandefa tantara vitsivitsy mampihoron-koditra novokarina tao an-toerana i Angelo Over ao amin'ny Myheaven. Manontany tena aho hoe iza amin'ireo no tena mampitsangam-bolo indrindra!
Indray andro, izaho sy ny namako nanao resaka tsy dia misy dikany ary ny zavatra manaraka izay noresahanay dia momba ny angano mampitsangam-bolo (na angano an-drenivohitra) izay henonay avy amin'ny olona hafa na avy amin'ny endrika haino aman-jery hafa. Nitantara tantara betsaka ny maro taminay, ary tena nampahatahotra ahy ny sasany tamin'izy ireny, noho izany nieritreitra ny hizara ny sasany amin'ireny tantara ireny aho ary hijery raha toa (sendrasendra) ianao efa nahare momba izany tany ho any. Amin'izao fotoana izao, tsy miteny aho hoe tena misy izy ireny, na te-hino azy ireny aho, satria ekeko fa angano an-drenivohitra ny ankamaroan'izy ireny. Nisafidy tantara roa izay notantarain'ny namako roa aho ary ny iray farany dia notantaraiko.
Nitondra anay ho amin'ny andro iray tamin'ny fiainany i Sabah Hussain. Nivoaka izy ary nijery ny jiro tany Ahmadi
Nandeha tany amin'ny tranon'ny rahavavin'i Maliha any Ahmadi izahay omaly satria niantso anay izy ireo mba ho avy ary hijery ireo ravaka ho an'ny andron'ny fahaleovantena izay miha-manatona (25 sy 26 Febroary)
Manontany tena i Maze Inona no tsy mety amin'ireo bandy eto!!?
Amin'ny fotoana rehetra aho no mahatsikaritra trangan-javatra toy izany miseho eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe, toy ny bandy mikaotikaoty ankizivavy amin'ny fomba tsy mendrika. Tsy mihatra amin'ny bandy Koetiana rehetra ity lahatsoratra ity… Fantatro fa ny maro amin'izy ireny dia mahay miaina sy mahalala fomba ary mahafantatra ny fitsipi-piainana
Fiandohànà marika vaovao ve izany? Mihevitra i yo ghurt fa vavolombelona manatri-maso izany izy.
Tsikaritro nandritra ny faran'ny herinandro fa mikarakara fampiroboroboana an'i Koety ny Ivontoeran'ny Sultan (ho an'ireo tsy mahalala ity rohinà toeram-pivarotana lehibe ity, ity angamba no lehibe indrindra any Koety, ary ilay tokana ampiasain'ireo mpila ravinahitra avy amin'ny firenena rehetra. Heveriko fa ilay fampiroboroboana dia fitsinjovana ilay Fetim-Pirenena ho avy ary mety hametraka ny TSC ho toy ny ‘marik'i Koety’ alohan'ny hahatongavan'ilay toeram-pivarotana lehibe Carrefour sy Geant tsy ho ela.